Home Page COVID-19 – मेसन सिटी स्कूलहरू COVID-१ Head मुख्यालय
तपाईंको अधीक्षकको रूपमा, म तपाइँलाई जान्न चाहन्छु कि हामी यहाँ छौं हाम्रो समुदायको सहयोग र स्याहार संचारको माध्यमबाट, स्रोतहरू, र आशा।
हामी यस चुनौतीपूर्ण घटना मार्फत प्रगति गर्दा, हामी संचार जारी राख्नेछौं – तपाइँलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ, जब हामीलाई यो थाहा हुन्छ. कृपया हाम्रो दैनिक सन्देशको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्.
COVID-19 घटनाको दौरान जडित रहनुहोस्
अप्रिलमा 6, हामी एक रिमोट लर्निंग वातावरणमा संक्रमण हुनेछ. जबकि हाम्रो स्टाफले यो पारीको लागि तयारी गर्दछ, तपाईको विद्यार्थीको लागि डिजाइन गरिएको धेरै स्रोतहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
थप सिक: रिमोट लर्निंग
विद्यार्थी अध्ययन साइट
मेसन सिटी स्कूलहरूको मानसिक स्वास्थ्य समर्थनका बारे अधिक जान्नुहोस्। यस समयमा सामनाको लागि रणनीतिहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
Chromebook कसरी प्राप्त गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस् यदि तपाइँको बच्चासँग उपकरण छैन भने. अगाडि हप्ताहरूको लागि कसरी समर्थन प्राप्त गर्ने सिक्नुहोस्.
हाम्रो समुदायमा कोही पनि भोकाउनु हुँदैन. कसरी खाना पाउने भनेर फेला पार्नुहोस्, र कसरी एमसीएसले हाम्रो परिवारलाई खाना असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ.
हाम्रो समुदायका धेरै व्यक्तिहरूका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो. हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो धूमकेतु कम्युनिटी सहयोग गर्न सँधै तयार छ. परिवारहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने तरिकाहरू खोज्नुहोस्, स्थानीय व्यवसाय (विशेष गरी अतिथि सत्कार गर्नेहरूलाई) र अन्य जो हाम्रो मद्दत चाहिन्छ.
हाम्रो परिवार र समुदायबाट साझा प्रश्नहरूको जवाफ हेर्नुहोस्।
कोरोना भाइरस प्रश्नहरूको उत्तर
सिनसिनाटीमा बाल अस्पताल बाट
अधिक COVID-19 विशेषज्ञ संसाधनहरू
हामी यहाँ छौ तपाईंको लागि ...
हाम्रो प्रिंसिपल बाट सन्देशहरु
“कठिन समयमा पनि, म हाम्रा स्टाफमा विश्वस्त छु, विद्यार्थी र समुदाय हाम्रो जिल्ला को कारण3ठूला चट्टानहरू. हामी यस समयमा हाम्रा विद्यार्थीहरू र परिवारहरूको बारेमा सोच्दैछौं र हामी चाहन्छौं कि तपाईंले हाई स्कूलको स्टाफलाई थाहा पाउनुहोस् जुन हामी यो नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछौं।. जबकि यो एक नयाँ चुनौती हो, MHS कर्मचारीहरु "क्षण मा रहनु" र यी घटनाहरु लाई प्रतिक्रिया दिन मा सबै गर्व छ कि हाम्रा सबै विद्यार्थी र परिवार दिन प्रति दिन बढ्न र हाम्रो धूमकेतु संस्कृति सिक्ने को रूप मा पूरा गर्न जारी राख्न। "
बबी डडMHS प्राचार्य
"यो कस्तो आशिषको कुरा हो कि यस COVID-१ Event घटना आउनु अघि हामी हाम्रो धूमकेतु संस्कृति र E + R = O को बारे हाम्रो बुझाइमा काम गरिरहेका छौं।. हाम्रो मेसन कमेट कम्युनिटीसँग दुर्भाग्यपूर्ण घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिन मलाई धेरै भाग्यशाली महसुस हुन्छ। "
लरेन जेन्टेनमेसन मध्य विद्यालय प्राचार्य
"हाम्रो कर्मचारीहरु, विद्यार्थी र समुदायले विगत दुई हप्ताहरूमा उडानमा समायोजन र अनुकूलन गर्न सिक्नुपर्‍यो. एमआई मा कर्मचारी "पल को स्वामित्व" छ र विद्यार्थी संग जोडित रहन को लागी काम गर्दै छ र सीखने जारी राख्ने छ कि पाठ योजना।. हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दैनिक आधारमा हेरेर मिस गर्छौं तर यस यात्रालाई सँगै लैजान अगाडि हेर्छौं. स्वस्थ र सुरक्षित रहनुहोस्! MI Strong रहनुहोस्!"
एरिक मेसेरमेसन मध्यवर्ती प्राचार्य
"हाम्रो ME धूमकेतुहरुबाट दया र आशाको अभिव्यक्तिहरू देख्नु हृदयस्पर्शी छ. हामी हाम्रो स्कूलको आदर्श वाक्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं, 'दया एम। ई। को साथ शुरू हुन्छ' उनीहरूसँग जडान हुन धूमकेतु देशका सदस्यहरूमा पुगेर उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि हामी उनीहरूको ख्याल राख्छौं।. मेसन इलिमेन्टरी स्टाफ हाम्रा विद्यार्थी र परिवारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। "
Javaris Powellमेसन इलेमेन्टरी प्रिन्सिपल
"हाम्रो धूमकेतु बच्चाको स्ट्यान्डमा बाँच्न र लगनशीलता अभ्यास गर्न यो पहिले कहिल्यै महत्त्वपूर्ण भएन, समानुभूति, लचकता, लचिलोपन र आशावाद. हाम्रो परिवार, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू सबै यी कथाहरू साझा गर्दै छन् कसरी यी गुणहरू बाँच्न साँच्चै नै यस क्षणमा जीवन परिवर्तन गर्दछ. हामी मेसन समुदाय मा हाम्रो धूमकेतु बच्चाहरु को गर्व छ!!"
मेलिसा ब्लाइमेसन अर्ली बचपन केन्द्र
हाम्रो विद्यार्थी र परिवारको हेरचाह गर्दै ...
चाहे यो खाना हो, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन गर्दछ, टेक्नोलोजी, वा सिक्ने संसाधनहरू - हामी यहाँ छौं हाम्रो मेसन र डीयरफिल्ड टाउनशिप समुदायको लागि.